Wararka - Shiinaha Carwada Ganacsiga E-Commerce-Xudduudda (Fair KWA)
Shiinaha Xudduudaha E-Commerce Trade Fair (Fair KWA) waa dhacdo ganacsi ganacsi oo loo qabtay si loo dhexgeliyo ilaha silsiladda bey'ada ee xudduudaha ka gudba ee xudduudaha ka gudba isla markaana siiya alaab-qeybiyeyaal tayo sare leh iyo fududeeye dhufaysyada xuduudaha iyo kuwa wax iibiya. Fair KWA waxaa la qabtaa laba jeer sanadkii gu'ga iyo deyrta, iyadoo bandhigga guga lagu qaban doono Fuzhou bisha Maarso iyo bandhigga dayrta ee Shenzhen bisha Sebtember.
Carwadan dayrta waxay furi doontaa 5 hoolal carwo oo ku yaal Shenzhen International Convention and Exhibition Center, Degmada Bao'an, Shenzhen, oo wadarta guud ay tahay 100000 mitir murabac. Dayrta Carwada KWA waxay dhexgalin doontaa kuwa hadda jira ee tayo-sare leh, kuwa iibiya e-commerce ee xuduudaha, iibsadayaasha iyo aaladaha ganacsiga e-guga xilliga guga, waxay ku biirayaan noocyo kala duwan oo soosaarka suugaanta e-ganacsiga ah oo soo-saarka xuduudaha ah, waxay hagaajinayaan qaybaha wax soo saarka iyo casuumaada iibiyeyaasha xuduudaha iyo iibsadayaasha, casriyaynta shirarka iyo waxqabadyada dhammaadka, abuuro bandhig horudhac ah warshadaha Shiinaha ee xudduudaha ka gudba.
Weifang Meibaoli Sponge Products Co., Ltd, waxay u hoggaansameysaa tayada ugu horreysa, waxaa ka go'an cilmi-baarista, horumarinta iyo soo-saarka alaabooyinka isbuunyada. In ka badan toban sano oo wax soo saar ah oo ah badeecado isbuunyo ah ayaa noo oggolaanaya inaan uruurino khibrad ballaadhan, si fiican u fahamno baahiyaha kala duwan ee iibsadayaasha adduunka. Dayrtan dayrta, Weifang Meibaoli ayaa ka qayb qaadan doonta bandhigga wax soo saarkeenna caanka ah iyo khibrad isweydaarsiga ganacsiga xudduudaha isaga gudba saaxiibbadayda dhammaan qaybaha nolosha. Qolkeena wuxuu ku yaali doonaa Hall 9 iyo Hall 14 siday u kala horreeyaan. Waxyaabaha la soo bandhigayo waxay noqon doonaan taxane barkimo xumbo xusuus ah, oo ay ku jiraan barkimooyin mawjad ah, barkimooyin U-qaabeeya, barkin barkin iyo alaabo kale oo barkin ah oo qaabab kala duwan leh Taxane kale oo caruusadaha caruurtu ku ciyaaraan ah iyo isbuunyo qurxin qurux ah. Sida soo-saar khibrad leh, waxaan aqbalnaa adeegga gaarka ah ee dhammaan alaabteenna si aan ula kulanno baahiyaha kala duwan ee iibsadaha.
Iyada oo leh boqolkiiba boqol xamaasad iyo daacadnimo, Weifang Meibaoli Sponge Products Co., Ltd ayaa halkan sugaysa inay kula kulanto 2021 Shiinaha Iskuduwaha Xuduudaha E-commerce.